अन्नपूर्ण पदयात्रा डायरी
यात्रा मनाङ्ग हुँदै ५४१६ मिटरको संसारकै चर्चित थोरङ्गपास पार गरेर मुस्ताङ्ग उद्धत थियो । जहाँ प्रमुख लक्ष्य अन्नपूर्ण, मनास्लु, धवलागिरी हिमश्रृंखला र वरिपरिका गाउँ वस्तीको सौन्दर्य लुट्नु थियो । लमजुङ्ग त केवल साघु मात्र थियो जुन काटेर हामी निकै माथि जानुपर्दथ्यो आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि ।
वेशिसहरमा हाम्रो चार पाँग्रे रोकिनासाथ मलाई एउटा क्लासिकल गीतले व्यूंझायो ।
"गाउँसहरमा लमजुङ्ग दरवार मायालाई दिने थिए फूल जस्तो जोवन भइसक्यो मेरो घरवार "
दरवार भन्नाले भव्य महल, सुविधा सम्पन्न घर बुझिन्छ । दरवार शक्तिको स्रोत पनि हो जहाँ चारैतिर पहरा दिएर मात्र राखिंदैन, प्रायः दरवारहरु उँभो र उचो जमिनमा खडा गरिएका हुन्छन् । लमजुङ्गको गाउँसहर दरवार जो शाह वंशको उद्गम स्थल होस् वा कम्बोडियाको एंकरवाट दरवार वा मानव सभ्यताको सुरुका दिनमा बनेका ग्रिसेली दरवार वा मन्दिरहरु ।
लमजुङ्ग पुग्नासाथ सानोमा कखरा हुँदै ८–९ कक्षामा पढ्दा शाह वंशको इतिहास पढेको हिजै जस्तो लाग्यो । पहिलो शाह वंशको राजा लमजुङ्गका कुल मन्डन शाहा अनि उनका छोरा यशोवर्मा शाह जसका दुई छोराहरु नरहरी शाह र द्रव्य शाह अनि द्रव्य शाहलाई गोर्खाका राजा बनाइएको त्यसपछि गोर्खाका राजा द्रव्य शाह र लमजुङ्गका नरहरी विच झगडा हुँदा उनीहरुको आमाले चेपे नदीमा दुध बगाएर सिमाना खडा गरेर युद्ध रोकेका कथा पनि हिजै पढेको जस्तो लाग्यो । द्रव्य शाहको पुस्ता राम शाह अनि उनका पुस्ता नरभुपाल साह हुँदै हाँगो पृथ्वीनारायण शाहसम्म फैलिएको थियो |
बर्खाको पदयात्रा हिलो बाटो, चिसा र चिप्ला ढुङ्गा पार गर्दै अघि बढ्न थाल्यो वेशिसहरबाट । पवित्र मस्र्याङ्गदी नदीलाई करिब २ घण्टा लगातार पछ्याइरहँदा खुदी बजार पुगियो, अमर उच्च मा.वि. मस्र्याङ्गदी र खुदी खोलाको दोबानमा अर्को ज्ञानको मुहान बनेर त्रीवेणी बनेको थियो । विरहरुको किल्ला लमजुङ्ग अनि यही सेरोफेरोमा जन्मिएका वडाकाजी अमर सिंह जो अग्रेज नेपाल युद्धका साक्षि इतिहास हुन उनको नामबाट नामाकरण भएको यो ज्ञान कुञ्जको आफ्ना कथा र इतिहास छ । कुनै समय लेखक खगेन्द्र संग्रौला यो ऋषिहरुको तपोभुमिमा आफ्नो अंग्रेजी ज्ञान बाँड्न पुगेका थिए रे । अनि यसै संस्थाबाट आफ्नो शैक्षिक दुनो बुनेका डा. सूर्य सुवेदी हाल वेलायतको लिड्स विश्व विद्यालयमा अन्तराष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक छन् ।
अको १ घण्टा हिंडेपछि नाग्दी पुगियो, जुन डा. हर्क गुरुङ को गाउँ थियो । कुनै समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्यातीप्राप्त भुगर्भविद, मानवशास्त्री लेखक यी गुरुङ्ग नेपालकै प्रशासनिक र राजनीतिक नक्साकारका रुपमा चिनिन्छन् । विभिन्न कालखण्डमा पर्यटन मन्त्री, विश्व बैंकका सल्लाहकार जस्ता उच्च पदमा योगदान गरेका वरिष्ठ भुगर्भविद डा. हर्क गुरुङ्गका सम्झनामा श्रद्धाको फूल चढाउँदै ५० मेगावाट विजुली दिन आतुर माथिल्लो मस्र्याङ्गदी विद्युत आयोजनाका ट्रक, डम्फर र लोडरहरुले हिलाम्मे पारेका वर्खाका सडकसँग सम्हालिंदै वाहुनडाँडाको भिरतिर लागियो |
पहिलो दिनको २–३ घण्टाको हिंडाई भित्र यी यावत दृश्यहरु देखापरे, जो कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्रिय महत्व, गर्व र इतिहासका पानाहरु थिए । यात्राको मुख्य तारो अन्नपूर्ण पदयात्रा भएपनि यो पदयात्राभित्र असंख्य घामका किरणहरु थिए जसलाई नहेरी, नछामी, नतापी अन्नपूर्ण पदयात्रा कसरी सफल हुन सक्थ्यो र ?
पदयात्राको पहिलो रात वाहुनडाँडामा खर्चिने पक्का भयो । दुबैतिर खोच अर्थात भिर, अनि एकातिर काली लेक साक्षी छ भने अर्कोतिर मस्र्याङ्गदी| काली लेक, अन्धकार देखिन्छ । ठ्याक्कै किलोमिटरको अन्दाज गर्न नसकिए पनि तल वैंस ले मस्त भएर बग्दै गरेको असारको मस्र्याङ्गदीकै स्पिडमा माथि मनाङ्गतिर वादल हानिंदैछ काली लेकको बाटो हुँदै । गाउँलेहरु यही पहाडको साना गराहरुमा धान रोप्दै छन् । हाम्रो वसाई यो सानो डाँडोमा अवस्थित वाहुनडाँडाको पनि उचो स्थानमा रहेको एउटा चिया घरमा छ । वाहुनहरुको उल्लेख्य संख्या भए पनि १ दर्जन जातिहरु मिलेर बसेका छन् यो गाउँमा मिलीजुली ।
मैले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको नाम मात्र लिएको के थिएँ, होटल साउनी उनको बगैंचामा काट्दै गरेको चाइनिज दुवो छाडेर मेरो सामु आइन् र घिमिरेको थाकथलो जो बादलले ढाकेको काली लेक मुन्तिरको प्रस्तुन तिर औंला तेर्साइन, अनि उनै घिमिरेको खण्डकाव्य गौरीका श्लोक गाउँन थालिन्, असारले उर्लिएको मस्र्याङ्गदीको स्वाँस्वाँमा गौरीका श्लोकहरु मेरो मस्तिस्कमा उर्लन थाले अनि मैले पनि साहुनीको स्वरमा स्वर मिलाई दिए ।
कवि कहाँ गौरीले मात्र चर्चित भएका हुन् र ? उनले नेपाली साहित्यलाई अरु थुप्रै गहनाले यति सुन्दर र कन्चन पार ेका छन् कि उनका समकालिन कविहरुले त्यति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी कालि लेक मुनिको सानो वस्तीका गोठाले कवि अहिले सिंगो नेपालका मुटुका कवि बनेका छन् । यी पहाडिया कवि हिमाल र तराईका पनि कवि बनेका छन् । आफ्नो होटलको महत्व बढाउन साउनी थप्छिन् कवि बेलाबखत बाहुनडाँडा पुग्दा खाना उनकै घिमिरे दाजुभाईकोमा खाए पनि सुत्न उनको होटलमा उक्लन्छन् । यसमा अन्यथा मान्नै पर्ने कुरा पो के छ र ? डाँडाको टुप्पोमा तल लमजुङ्गको बेशिसहर र माथि मनाङसम्म देखिन्छ यहाँबाट । यहाँ यस्तो चिसो र मिठो हावा बहन्छ जस्को प्रभावमा परेर घिमिरेले “लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, हिमालचुली मन्तिर पानी भर्ने पँधेरो” लेखेको हुनुपर्दछ ।
बाहुनडाँडाले माधव घिमिरेलाई मात्र लेखक बनाएन । लिभिङ्ग माइक्रोसफ्ट टु चेन्ज द वल्र्ड नामक प्रस्तावको शिलान्यास यही डाँडाबाट गरेर माईक्रोसफ्टका पूर्व सीइओ जोन उडले पनि यसै ठाउँलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो पुस्तकको पाण्डुलिपी तयार गरे । यसका साथै उनले रुम टु रिड नामक सोझै साना नानीहरु अनि उनका भविष्यसँग सरोकार राख्ने संस्था खडा गरे जसले त्यो भेगमा आज शैक्षिक क्षेत्रमा पुस्तकालय, भवन निर्माण आदिमा उल्लेख्य सहयोग गरी होस्टेमा हैंसे थपेको छ ।
साउनीसँग राष्ट्रकवि घिमिरेका कुरा गरीरहंदा साउजी सर्ट पाइन्ट, इस्टकोटमा ठाटिएर आइपुगे बिहेको बेहुलाझैं कुनी कताबाट । करिब ७० वर्षे उनले ओभरटेक गरिहाले मलाई नमस्कार गर्नमा । एकैछिनपछि लोकल रक्सी खाने कार्यक्रम बन्यो । रक्सीको सर्कोसँगै कुराकानी पनि सुरु भयो । २ सर्को पिउनासाथ साउजीले आफ्नो विगत कोट्याउन लागे, गिलासको रक्सी देखाउँदै भने : मैले यो पिउन ८ वर्षदेखि थाले अहिले ७० वर्ष भए । अहिले दिनमा ५– ६ गिलास पिउँछु । पहाडी जिवन उकालो ओरालो, घाँसपात, मनग्गे शारीरिक व्यायामले साउजी तन्दुरुस्त देखिन्थे ।
वेशिसहरदेखि मनाङ्ग जोड्ने पदयात्रा बाटोलाई हालै यातायातको विकासले ओझे लमा पारेको भए पनि कुरैकुरामा थाहा भयो साहुजीलाई व्यापारको भोक रहेनछ । विकल्पमा उनले तरकारी खेती, पशुपालनलाई शिरोधार्य गरिसकेका रहेछन् । कुनै समय डा. हर्क गुरुङ्गसँग त्यो क्षेत्र (लमजुङ्ग, मनाङ्ग) का स्थानीयवासीले त्यो क्षेत्रमा यातायातको विकास गरिनुपर्ने माग राख्दै गर्दा डा. गुरुङ्गले त्यो क्षेत्रका जनतालाई फलफूल र उल्लेख्य जडीबुटी उत्पादन गर्न प्रेरित गर्दथे । जसकारण त्यहाँ मालसामान बोकेर पुग्ने ढुवानीका साधनहरु उताबाट पनि रित्तै नर्फकुन् । त्यसैको प्रेरणामा परी लमजुङ्ग मनाङ्गका जनताहरुले सुन्तला, स्याउ, केरा खेती सुरु गरेको पाइन्छ, ति क्षेत्रहरुमा । पर्यटक होटलको अलावा यो सानो गाउँमा यि साउजी र साउनीले पनि कृषि पशुपालन गरेर आफ्नो मिहेनेती जिन्दगीको प्रमाण पेश गरेका थिए ।
रामेछापमा जन्मिएर, पोखरा, स्याब्जा हुँदै लमजुङ्गका विकट गुरुङ्ग गाउँहरुमा खुद्रे व्यापार गर्दै साउजी हाल वाहुनडाँडाको पहाडी टापुमा साम्राज्य जमाउन कसरी आए त्यो सबै भाग्यको खेल मात्र नभईकन उनको परिश्रम र पसिनाको उपज पनि हो । कुनै समय नेपालकै धेरै पर्यटक भित्र्याउने अन्नपूर्ण पदयात्राको बाहुनडाँडाको अतिउत्तम जग्गामा सयौं पर्यटक सुताउन सक्ने होटलको धनी हुनु पनि चानचुने कुरा होइन् एउटा खुद्रे व्यापारी । गफैगफमा थाहा भयो उनी वयस्कमा गल्लाको नजरमा पनि परेका रैछन् । जसले उनलाई भारतीय पैदल सेनाको जवान बनाएछ । तर बाहुनडाँडाको उकालो ओर ालो अनि चिसोमा गडेको मन कहाँ भारतीय सेनाको सानो टुकुडीमा रम्न सक्थ्यो र ? उनले त्यो जागिर त्यागिदिएछन् केही वर्षपछि ।
त्यो साँझ हाम्रो गफ हुँदै गर्दा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको काली लेकमा पानी बर्सिएर बादल (रेस्क्यू गर्न हुइकिएको हेलिकप्टर) जसरी मनाङ्ग हानिदै थियो । तल मस्र्याबदी उस्तै रफ्तारमा तलतल बग्दै थियो । माथी आकासमा चन्द्रमा र ताराहरु बादलसँग लुकामारी खेल्दै थिए । नपढेर पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ, एउटा असल मान्छे भएर समाज सेवा गर्न सकिन्छ, मिहिनेत गरेर मिठो फल खाँदै जिन्दगी गुजार्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा मलाई पनि मिलिरहेको थियो यो असारे महिनाको एक साँझ एउटा ७० वर्षीय यी वृद्धासँग गफिंदा । साउजीको र ाजनीतिक झुकाव बुझ्नै खोज्दा उनको अनुहार त्यति निको देखिएन । माने उनले राजनीतिको फोहोरी खेलबाट आफ्नो कर्मविर जिन्दगीलाई टाढै राखेछन् । अन्तमा उनले स्पष्ट रुपमै राजनीतिको कुरै नगर्नुस्, हामी त खायो ढिडो, हग्यो लिडो भन्दै विदा भए ।
पदयात्राको पहिलो दिन यसरी सकियो अर्को दिन बास बस्न च्याम्चे पुगियो त्यहाँ खासै गफ गाफ मिसाउने प्राणी पाइएन तैपनि ब्राजिलले ७ गोल खाएको दृश्य हेर्दै बसियो विश्व कपको तेस्रो दिन लमजुङ्गलाई बिदाइको हात हल्लाउँदै मनाङ्ग पसियो । दानाक्युमा भेटिए अर्का एक मिहनेती अधवैंशे । लमजुङ्ग थकान की गुरुङ्ग सेनी विवाह गरेका यी मनाङ्गे सानो पर्यटक होटलको अलावा स्थानीय विद्यालयका प्रअ पनि रहेछन् । उनमा प्रअको घमण्ड केही थिएन । दिनभरी कखरा पढाएका उनका हातले त्यो तेस्रो साँझ हाम्रो लागि कुखुरा मार्दै थिए ।
अब परिवारको सदस्य संख्या गिन्ती हुन थाल्यो बुढाले जेठी छोरी मलाया गएकी छ भने | कान्छी स्कुल अनि झण्डै ७–८ वर्षीय एक्लो छोरो जो त्यहाँ कुखुराको चल्लासँग खेलिरहेको थियो । मलाया भनेको सांकेतिक भाषामा हाडेलसुन पाउने भिर र जंगल रहेछ । यदि उनकी जेठी छोरी पाँचऔंले वा यार्सा टिप्न गएकी हुँदी हुन् त बुढाले युके गएकी छ भन्ने रैछन् । जुन जडीबुटी खो ज्न गएको हो त्यसैको मूल्य अनुसार त्यसलाई भिन्न देशको संज्ञा दिइंदोरैछ, त्यो ठाउँमा जटिबुटीको आर्थिक महत्व अनुरुप । यो ठट्टा गर्दागर्दै साउनी कुखुराको मासु पोल्न र पकाउन थालिन्, साउजी छ्याङ्ग छान्न थाले अनि अर्को विशेष चरणको गफ सुरु भयो ।
खच्चड व्यापारी, किराना व्यापारी, हुँदै पाइलैपिच्छे ठेस लाग्दै दोबाटो मा उनीहरुको पर्यटकीय होटलको सपना साकार भएको रैछ । पर्यटन क्षेत्रलाई बुझेको ठानेर उनले अन्नपूर्ण पदयात्रामा पर्यटकको आगमन अब मोटरबाटो ले मनाङ्ग जोडेको भिन्न अवस्थामा के होला भन्ने जिज्ञासा राखे । मैले सबै कुराको आयु हुन्छ, मान्छे होस वा मान्छेलाई जिवन दिने औषधि, अब अन्नपूर्ण पदयात्रा जो थियो उसको आयु सकियो भनिदिए । यो डेट अफ भयो । मोटर को हर्न र धुलो खाँदै गरिनुपर्ने यो पदयात्राको औचित्य छैन, तर उपल्लो मनाङ्ग, तिलिचो ताल, त्यो क्षेत्रका गुफा, नारफू, थोरङ्ग क्षेत्र अझै पनि पर्यटक र पर्यटन व्यवसायकिो मिलन विन्दु बन्न सक्छ । मैले यो भन्दै गर्दा साउजी हौ सिए र उनकी श्रीमतीसँग आँखाले कुनी के गफ गरे मैले नबुझ्ने गरी ।
एउटा सानो होटल, अनि सानै जागिर हुर्केला छोराछोरी, शिक्षादिक्षा, अनि तिनका विहेदान, आदिको भारीले यी साउजी र साउनीको दिनचर्या केही गह्रुंगो बनाएको जस्तो देखिए पनि त्यसलाई यो पहाडको कुनामा उनीहरुले सहजै आत्मसाथ गुरेका थिए खुसीको पछ्यौरी ओडेर ।
अर्को रात अर्थात चौथो रात मनाङ्गको सदरमुकाम काटेर चामे पुगियो जहाँ ९० वर्षीय मनाङ्गे हजुर आमासँग भोटको नुनदेखि सुन व्यापार सम्मको कुरा भए । लोमान्थाङ्गदेखि डुम्रेसम्म गाँस र कपास खेपेका पुराना कथा सुन्ने मौका मिल्यो । मलाई यी पुराना कथा सुनाउँदै गर्दा उनी आफ्नै हिस्ट्रीसँग अपडे ट हुँदै थिइन । बाहुनडाडामा हतारमा बगेका उही मस्र्याङ्गदीलाई ४ दिन पछ्याइरहँदा यो ठाउँमा मस्र्याङ्गदीको बहाव शान्त थियो । अर्की बिहान फापरको रोटी र नास्ता गरेर हुम्डे विमानस्थल हुँदै मनाङ्ग पुगियो ।
इतिहासकारहरुले राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रप्रति अनिच्छुक, तानासाही शासकको रुपमा लिए पनि मनाङ्गे जनताले उनलाई सर्वेसर्वा, भगवानको अवतारको रुपमा लिन्छन् । सन् १९७० मा राजा महेन्द्रको मनाङ्ग भ्रमणले तिब्बत र भारतमा मात्र सिमित व्यापार गरी बसेका मनाङ्गे बासिन्दालाई दक्षिणपूर्व एसियामा सम्म व्यापार को नयाँ ढोका खोलिदियो । पासपोर्टको उपलब्धता अनि विनारोकतोक विदेश व्यापारमा भाग लिन पाए मनाङ्गबासीहरुले । जसको कारण उनीहरुलाई उलेख्य आर्थिक लाभ हुन गयो । त्यसपछि विकसित हुँदै गरेको अन्नपूर्ण पदयात्राले लाखौ ं पर्यटकलाई मनाङ्ग भित्र्यायो । मध्यपश्चिमको एउटा अति दुर्गम जिल्ला जो हिमाल पारीको जिल्लाको नामले पनि परिचित छ त्यो ठाउँ हाल नेपालको एउटा मनाङ्गमा आइपुग्दा पाँचौ रात भएको थियो ।
अन्नपूर्ण हिमाल निकै कम दुर ीमा देखिने यो ठाउँमा आइपुग्दा यात्राले विशिष्ट उचाई लिएको भान हुन्थ्यो । साउजीहरु बर्खामा प्रायः काठमाडौं जान्छन् । चैत वैशाखमा कमाएको पैसा बैंक व्यालेन्स गर्न । केही समय काठमाडौं वा विदेश बसेपछि, जाडोको लागि हिटर, सिरक, भाँडाकुँडा खरिदेर साउजीहरु फेरी असोज कात्तिकको व्यापार सम्हाल्न मनाङ्ग फर्कन्छन् । मनाङ्ग यो समय प्रायः कामदारहरुकै कमाण्डमा रहन्छ । हाम्रो होटलको पनि यथार्थता त्यही थियो ।